“Waxaan u digayaa in dadka masaakiinta ah lagu dul doono dhul iyo raashin dib ayaanan ugu”.. maayarka Hargaysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Waxaan u digayaa in dadka masaakiinta ah lagu dul doono dhul iyo raashin dib ayaanan ugu”.. maayarka Hargaysa
Hargaysa (SDWO): Maayarka caasimadda Hargaysa ayaa digniin u diray guddiyada xaafadaha iyo dad uu sheegay in ay ku malxaafsadaan magaca qoysaska barakaceyaasha iyo danyarta ah ee ku nool magaalooyinka dalka gaar ahaana caasimadda.
C/raxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco), waxa uu sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan guddiyadda xaafadaha iyo xubnaha kale ee iyagoo ku gabanaya dadka duruufaysan hay’adaha mucaawimo kaga soo qaata.
Maayarka Hargaysa waxa uu sidan ka sheegay hadal uu maanta u jeediyay dadweynaha degan xaafadda Istaanbuul ee koonfurta magaaladda Hargaysa oo uu kormeer qiimayn ah ku tegay, kadib markii khasaare ka soo gaadhay xaafadaas Dab todobaadkan ka kacay.
Waxa uu tilmaamay maayarku in si dhakhso ah ay u meesha uga rarri doonaan bulshadda xaafadaas ku nool oo ah qoysas dan yar ah, hase yeeshee aan la aqbali Karin in qaar ka mida dadka aqaladda waaweyn leh ay buulal ka ag dhistaan markay maqlaan in la rarrayo si ay dhul ama jagooyin u helaan.
Soltelco ayaa intaas ku daray in dawladda hoose ay u diiwaangashan yihiin tiradda qoysaska barakaceyaasha ah ee degan xaafadda Istaanbuul, isla markaana cida isku dayda in ay ku soo dhex dhuumato tallaabo laga qaadi doono.
“Waxaanu arkaynay dadka meeshaas degan iyo in kaloo saddex laabkeed ah, oo ahaa dadka suuqa jooga ee aqaladda cad-cad ku jira oo buulal ka ag dhistay. Sidaan aragnay dadka buulasha dhistay qaar na waxay ahaayeen kuwo ay duruufta iyo baahidu ka dhab tahay.
Dad na ay ahaayeen kuwo magaaladda kale ka yimid, oo markii ay na arkeen soo yaacay. Degmo ahaan way noo diiwaan gashan tahay anaga, cid kastoo degani. Waanan samaynay diiwaangelintoodii, socon na mayso”ayuu yidhi maayarka Hargaysa.
Isagoo digniin u dirayay dadka doonaya in ay wax ku raadsadaan magaca qoysaska barakaceyaasha ah, waxa uu yidhi “Shacbigeenana waxaan uga digayaa in dadka masaakiinta ah lagu dul doono ama dhul ha ahaato ama raashin ha ahaatee. Waxaanu dib ugu noqon doonaa guddiyadda iyo dadka ku dul shaqaysta dadkaasi, ee hay’adaha u taga, ee yidhaahda wax baanu siinaynaa.
Waxay noqon doontaa cid ay isla og tahay, hay’adda dawladda Somaliland u xil saaran barakaceyaasha, wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda iyo dawladda hoose ee Hargaysa”.
Geesta kale maayarka waxaa kormeerkaas ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda Maxamed Cilmi Aadan (ilkacase). Isagoona la hadlayay dadka xaafadda Istanbul oo isu soo baxay wuxuu uga tacsiyadeeyay qoyskii uu ka baxay marxuum Dabkii dhawaan xaafadaas ka kacay ku geeriyooday.
Waxaanu tilmaamay in si dhakhso ah ay uga rarri doonaan qoysaska degan xaafadaasi. Waxaanu yidhi “Marka hore waxaan tacsi u dirayaa qofkii Dabkii halkan ka dhacay ku geeriyooday. Kuwii ku dhaawacmay na in ILLAAHAY caafiyo.
Todobaad gudihii ayaanu dadka kaga rarri doonaa, meel ay leeyihiin na la dejiyo ayaanu u samayn doonaa”.